15 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siin Karo Si Aad U Barato Sida Loo Codeeyo Sanadka 2021 Goobta Hantida
Bogga ugu weyn 15 Siyaabood Oo Lacag Lagu Siin Karo Si Aad U Barato Sida Loo Codeeyo 2021 -ka
15 Siyaabood Oo Lacag Lagu Siin Karo Si Aad U Barato Sida Loo Codeeyo 2021 -ka
Ma ogtahay in lagu siin karo Lacag si aad u Barato Codeynta?
Koodh waa mid ka mid ah saameynta horumarka tikniyoolajiyadda. Haddii aad la yaaban tahay sida lacag looga helo khadka tooska ah isla markaana aad u aragto koodh markii ugu horreysay, maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharraxayaa ereyga.
Ku dhowaad barnaamij kasta oo taleefankaaga ku jira waa wax soo saarka koodhka. Barashada mashiinka, boggaga internetka ee sirdoonka farsamada gacanta iyo alaabada kale ee tikniyoolajiyaddu waa wax soo saar koodh ah.
Waxa xiisaha lihi, waxaad kasban kartaa lacag badan oo dheeri ah intaad baranayso sida loo codeeyo. Bal qiyaas quruxda AI, ciyaaraha loo nisbeeyo magacaaga. Gabe Newell Dave oo ah ninka ugu caansan uguna horumarsan ciyaaraha adduunka oo qiimihiisu yahay $ 1.3 bilyan ayaa noqday mid ka mid ah shaqsiyaadka loogu ixtiraamka badan yahay warshadaha ciyaarta.
Maqaalkani wuxuu sharxayaa sida aad u kasban karto inta aad baraneyso lambarrada. Waxaad ciyaari kartaa horyaal weyn marka aad noqoto xirfadle meheradda. Jadwalka tusmada hoose wuxuu iftiiminayaa siyaabo badan oo lagu siin karo lacag si aad u baratid sida loo codeeyo 2021.
Waa maxay Codaynta?
Koodh si fudud waa qorista taxane amar ah qaab cayiman oo loo turjumay luuqada kombiyuutarku fahmayo. Koodh garaynta maahan shaqo fudud laakiin haddii aad xirfad leedahay oo aad dadaal badan tahay, waxay u badan tahay inaad lacag ka hesho.
Waxay ku abaalmarinaysaa si qurux badan haddii aad khibrad fiican leedahay. Si kastaba ha noqotee, ma jiro boos shaqo oo loo yaqaan "coder". Ama waxaad tahay injineer softiweer, horumariyaha webka ama waxaad ka shaqeysaa waaxda IT -ga.
Imisa ayaan Ka Sameyn Karaa Codeynta?
Soo-saare sare oo leh waayo-aragnimo badan ayaa sida caadiga ah la siin doonaa wax ka badan soo-saare heer-gelitaan ah xitaa isla isla qeybtaas.
Sidii aan horey u sheegay, koodh gareynta ayaa ah shaqo si fiican wax u qabata. Tusaale ahaan, gudaha Mareykanka haddii ay dhacdo inaad shaqo codsi hesho ama horumariso ahaan markaa waxaad u badan tahay inaad kasbato $ 89,600 sanadkii. Mushaharku wuxuu u dhexeeyaa $ 41,200 (ugu hooseeya) iyo (ugu sarreeya) $ 142,000. Laga soo bilaabo 2020, codeeye kumbuyuutar ayaa sameeya celcelis ahaan mushahar dhan $ 63,903 sanadkiiba barnaamij bilowgiisuna wuxuu qaataa qiyaastii $ 50k iyo koodhadh khibrad leh waxay kasbadaan kudhowaad $ 85k.
Sida Lacag Loogu Helo Si Aad U Barato Inaad Koodh Ka Soo Saarto Guriga
Waxaa jira siyaabo fara badan oo lacag looga sameeyo koodh -ka iyo baloogyada hoose ayaa iftiin dheeraad ah ku shubi doona. Haddii aad go'aansato inaadan si buuxda u shaqaalayn urur kasta, waxaad samayn kartaa lacag adiga oo guriga ka shaqeeya.
Hoos waxaa ku yaal siyaabo aad lacag ku heli kartid si aad u baratid inaad koodh uga soo qaadato guriga:
#1. Ku hawlan Freelancing.
Freelancing waxay ka kooban tahay u fidinta macaamiisha adeegyo barnaamijyo ah. Way fududahay oo ku habboon tahay sidoo kale waxaad dooran kartaa waxa adiga kugu habboon.
#2. Blog -ga tooska ah.
Bilaabida baloog waa fududahay laakiin inaad sameyso lacag qabow waa inaad lacag ku kasbataa adoo siinaya xirfado sireed khadka tooska ah, inaad ku dallacdo waxyaabaha aasaasiga ah iyo inaad kasbato xiriiro xiriir la leh.
# 3. Horumarinta Barnaamijyada
Haddii aad haysato fikrad app oo aad u wanaagsan oo suuq geyn karta, way kuu fududdahay inaad lacag samaysato adiga oo lacag la'aan ku abuuraya. Barnaamijyada ayaa gacanta ku haya maalmahan waa qaybo aad u weyn oo ka mid ah hawl -maalmeedkeena.
Haddii aad haysato runtii barnaamij fikrad wanaagsan oo suuq geyn ah markaa way kuu fududdahay inaad lacag sameysato. Abuur, lacag samee oo ku raaxayso. Fiiri Upwork, Apache Cordova, Dardar -geliye, iyo inbadan oo ku saabsan fikradaha cajiibka ah.
#3. Noqo baraha onlaynka ah ama kan tooska ah.
Dad badan ayaa xiiseynaya barashada koodh -kariska waxaadna noqon kartaa macallin. Waxa kale oo lagu siin karaa lacag adiga oo ka qaybgalaya Jaamacadda iyo xeryaha kabaha.
# 4. Ku biir Tartanka Codaynta.
Kaliya maahan inay bixiyaan lacag aad u badan laakiin sidoo kale waxay kugu kaxeeyaan inaad si ka fiican u sameysid cod -bixiye oo kaliya adoo ka qaybqaata waxaad la kulmaysaa fursado kale duwan oo kala duwan. Qaar ka mid ah tartammada codeynta ee ugu caansan waxaa ka mid ah Topcoder, CodeChef, HTML5Contest, iyo CallingAllInnovators…
# 5. Samee Kanaal YouTube ah
Qof walba wuxuu adeegsadaa YouTube. Waad abuuri kartaa kanaalkaaga, waad heli kartaa macaamiil waxaadna la wadaagi kartaa talooyin ku saabsan koodh. YouTube waa mareegaha loogu booqashada badan yahay kalsoonida oo dhan markaa i aamin markaan ku idhaahdo si joogto ah oo shaqo adag lacag baa iman lahayd.
# 6. Horumarinta Ciyaaraha
Tani waa hubaal hab lacag lagu helo. Samee ciyaartaada oo ku iibso aalado waaweyn. Adigoo adeegsanaya xirfadaha koodh, waxaad ku horumarin kartaa ciyaaraha lacag caddaan ah oo waxaad ku iibin kartaa aaladaha sida Fupa
#7. Abuur Ebooks
Abuuritaanka buugaagta ebook-ka oo leh talobixin codbixineed oo aad u wanaagsan si dadku ay wax uga bartaan waa hab kale oo lacag looga helo koodh-sameynta. Waxay noqon kartaa maqal ama warqad, hadba kii adiga kuu shaqeeya.
15 siyaabood oo lagu barto sida loo codeeyo.
Waxaa jira tiro dugsiyo ah iyo casharo onlayn ah oo baraya koodh. Qaabka aad u dooratid inaad baratid sida loo codeeyo waxay ku xirnaan doontaa dhowr sababood oo adiga kugu saabsan.
Liiska hoos ku qoran ayaa kaa caawin doona inaad hesho waxa ku habboon ee codeynta ee ku habboon xiisahaaga.
#1. Horumarinta Shabakadda ee Bilowga
Madalkan onlaynku waa bilaash ardayduna waxay bilaabayaan koodh shan maalmood gudahood. Koorsooyinku waa kuwo ku wajahan natiijada waxayna baraan waxyaabaha daruuriga ah si aad u hesho mareegahaaga internetka ee ugu horreeya. Dhamaadka koorsada, waad ogaan doontaa haddii aad runtii rabto inaad noqoto horumariyaha webka ama waa uun weji.
# 2. Xerada Xeerka Bilaashka ah- Kani waa xero boot oo ka caawisa ardayda qalin jabisa inay shaqo ka helaan shirkadaha farsamada. Waxay baraan naqshadeynta webka iyo horumarinta webka.
# 3. Arag jamac ah
Waa bilaash iyo lacag la'aan khadka tooska ah. Waxaa loogu talagalay kuwa bilowga ah ama kuwa dhexe. Ku habboon horumarinta web -ka oo rajaynaya inay ballaariyaan xirfaddooda. waxaa laga yaabaa inaysan dhab ahaan aheyn meesha saxda ah ee bilowga ah maxaa yeelay koorsooyinka waxaa loogu talagalay kuwa horumariya oo ka shaqeeya webka
#4. Golaha Guud
Waxay leedahay meelo badan oo ku baahsan Mareykanka, Australia, iyo UK. Sida bilow ah, waxaa laga yaabaa inaad bixiso ka hor intaadan marin marinkan. Waa offline iyo waqti buuxa.
#5. Barnaamijka Horumarinta Shabakadda Aasaasidda Xirfadda
# 6. Akadeemiyada Code
Akademiga Code wuxuu bixiyaa fasalo koodh Lix luqadood oo barnaamijyo kala duwan ah sida Python, JQuery, PHP, Ruby, HTML, iyo CSS. Waa intarneedka waana bilaash waana la talin la'aan. Xeer
# 7. Udacity
Fasallada waxaa lagu baraa muxaadarooyin fiidiyoow ah iyo su'aalo isku dhafan oo ardayda ah. In kasta oo fasaladu bilaash yihiin heerka guusha ardayda aad bay u hooseysaa. Waa khadka tooska ah, la bixiyo oo aan la barin
#8. Ciyaaryahanka Xeerka
Aruurinta fiidiyowyo bilaash ah oo khadka tooska ah oo ardayda bara sida loo sameeyo hawlo cayiman. Waxaad daawan kartaa nambarro qoraal ah inta lagu gudajiro casharka. Waa onlayn, bilaash u ah kuwa bilowga ah iyo kuwa dhexe.
# 9. Avengers Code
Avengers -ka koodhku waa madal aad loo habeeyay laakiin dhallaanka cusubi waa inay wax bartaan iyagoon lahayn casharrada fiidiyaha. Waa onlayn, qayb baa la bixiyaa, qaybna waa bilaash oo lama talin
# 10. Bloc
Isku darka koorsooyinka internetka oo ay weheliso latalin. Bloc wuxuu bixiyaa dabacsanaanta barashada onlaynka oo leh hannaan umeerin shaqsiyeed. Waa barnaamij waxbarasho oo aad u xoog badan oo ardayda iman karta waxay u baahan yihiin inay u diyaargaroobaan inay shaqeeyaan.
# 13. Gabadha yaa furaysa
Madalkan waxaa loogu talagalay in aan haween badan ku gelin dunida farsamada. Waxaa loogu talagalay gabdhaha da'doodu u dhexeyso 13 illaa 17. Waa khadka tooska ah oo lagala taliyo. Ma aha in qof kastaa ka faa'iideysan karo sababta oo ah waxay u badan tahay gabdhaha.
# 14. Akadamiyada Khan-Khan
Meel fiican oo laga bilaabo dadka rajaynaya inay bartaan sida loo codeeyo farshaxanka ama ciyaaraha-in kasta oo ay ka yaryihiin kuwa doonaya inay bartaan horumarka ku-jihaysan ganacsiga. Madal waxbarasho oo lacag la’aan ah, Khan Academy waxay adeegsataa casharrada fiidiyaha ee ay khubaradu bareen si ay u daboolaan maadooyin kala duwan.
# 15. ) Bento
Bento waa safar la hagayo oo ku saleysan casharrada horumarinta webka ee shabakadda oo ay ku jiraan fiidyowyo, fasallo is -dhexgal ah iyo agab akhris. Waa khadka tooska ah waana bilaash oo lama talin laakiin laga bilaabo bilow ilaa horumarsan
Madalkan oo dhan waxaa loogu talagalay inuu kugu qalabeeyo aqoonta iyo xirfadaha ku siin doona shaqadaada riyada oo kaa caawin doonta inaad lacag samaysato ha ahaato gurigaaga ama dhinacaaga. Ogow in ay noqonayso geedi socod degdeg ah oo hubaal ma aha wax fudud.
Waxaan rajaynaynaa in maqaalkayaga ku saabsan sida Lacag laguugu barto Si aad u Barato Xeerka uu waxtar weyn kuu yeelan doono. Waxaad booqan kartaa bogagga YouTube -ka waxaadna yeelan kartaa dad sameeyay ka hor inta aysan si dhab ah kuugu sheegin waxaad u baahan tahay inaad ogaato.
20 Siyaabood oo Lacag laguugu Siinayo Raadinta Shabakadda 2021 | Samee $ 3000/Bishii
Lacag Bixin si aad ugu guurto Dal kale | 15 Meelaha ugu Fiican 2021
Maxaan Ku Maalgashan Karaa 100 Doollar? Talada Khubarada ee 2021
Shaqooyinka Bixinta Degdegga ah ee loogu talagalay 18-jirka da'doodu tahay 2021
Sida Loo Maalgaliyo $ 1,000 Si Lacag Loogu Sameeyo | 2021 Liis Cusub
10 ADEEGYADA KAYDKA BILAASHKA EE KALIYA EE BILAASH AH / ADEEGYADA DARYEELKA QAABKA EE 2021
20 QALABKA UGU FIICAN Fiidiyowga U Sameeya Bilowga 2021
Ma xasuusataa fasallada "luqada qalaad" ee lagugula taliyay (mararka qaarkood xitaa lagu qasbay) inaad ku qaadato dugsiga sare?…
Bangiyada ugu Fiican Kentucky Sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Haddii aad degan tahay Kentucky oo aad raadinayso bangi wanaagsan waxaad u isticmaali kartaa dhaqaalahaaga…